सहकारी विचारले होइन सिद्धान्तले चल्छ « Sahakari Nepal
सहकारी विचारले होइन सिद्धान्तले चल्छ
प्रकाशित मिति : 14 August, 2015 8:46 am
उपाध्यक्ष, नेशनल को-अपरेर्टस एलाईन्स नेपाल
१. सहकारी क्षेत्रमा कहिले र किन प्रवेश गर्नुभयो ?
म सहकारी क्षेत्रमा वि.स. २०५७ सालेदखी प्रवेश गरेको हुँ । म पहिलेदेखी नै सामूहिकतामा काम गर्न रुचाउने र सामाजिक कामप्रति पनि विशेष लगाव भएको व्यक्ति थिएँ । र जब मैले सहकारीको विषयमा राम्रोसँग बुझे , यसका सिद्धान्तले मेरो सामूहिकतामा काम गर्र्ने चाहनालाई पूरा गर्छ जस्तो लाग्यो र मेटो सहकारी संस्थामार्फत मैले सहकारी यात्रा सुरु गेरें । त्यसपछि म निरन्तर नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई कसरी उचाइमा पराउन सकिन्छ भनेर लागिपरेको छु, पछिल्लो समय नेशनल कोअपरेर्टस एलाईन्समा उपाध्यक्षमा चुनिनु यसैको परिणाम हो ।
२. नेपालमा सहकारीको अवस्थालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
हामीकहाँ समस्या हरेक क्षेत्रमा छन् , सहकारीपनि यसबाट अछुतो छैन् । केबल ५ प्रतिशत खराब सहकारीले गर्दा पूरै सहकारी क्षेत्रलाई नै खोट लगाउन भने हुन्न् । बेलामा उपयुत्त ऐन, नियम नबन्नाले पनि समस्या भएको हो । सहकारी ऐनमा सदस्यका पैसा अपचलन गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्था भइदिएको भए यी समस्या पनि देखिने थिएनन् । तर अहिले विधेयक बाटै भएपनि ऐन संसोधन भएको छ र कारवाहीको विषयमा ऐनले धेरै कुरा बोलेको छ जुन सकारात्मक कुरा हो । यति हुदाँहुँदैपनि हामी नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानमा सहकारीले पुराएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नु हुदैन् । सहकारी कै माध्यमबाट हाम्रो देशका निम्न तथा मध्यम वर्गिय मानिसमा वित्तिय पहँच पुगेको कुरालाई हामीले नर्कान सक्दैनौं ।
३. राजनितिमा क्रियाशिल भइरहनुभएको मान्छे, सहकारी क्षेत्रतिर कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
प्रमुख कुरो त सहकारीले वित्तिय पहँच नपुगेका मध्यम तथा निम्न वर्गिय मानिसम्म वित्तिय पहँच पुराएको छ जुन एकदमै आकर्षक कुरा हो । र मैले पहिला नै भनिसके सहाकरीमा जुन सामूहिक भावनामा काम गर्ने चरित्र छ त्यसले मलाई एकदमै आकर्षित गरेको छ । हाम्रोजस्तो न्यून विकसित राष्टको आर्थिक रुपान्तरणको लागि सहकारी एकदमै आवश्यक छ भन्ने मेरो धारणा हो ।
४.राजनिति र सहकारीमा के फरक पाउनुभयो ?
राजनिति विचारको आधारमा गरिन्छ । तर सहकारी सिद्धान्तको आधारमा चलाईन्छ । सहकारीमा यीनै भिन्न विचार बोकेका मानिस पनि सिद्धान्तको आधारमा सँगै उभिन्छन् । तर दुवैमा सेवाभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व भने पाईन्छ ।
५.नेशनल को-अपरेटर्स एलाईन्सले सहकारी अभियानलाई कसरी सघाउँछ ?
नेपालमा सहकारी अभियान विपिको समाजवादी नीतिबाटै अघि बढेको हो । पछि आएर काङग्रेसले यसलाई सँगै डोराउन सकेन् र फलस्वरुप लेफटिस्टले यसमा पूरै पकड जमाए । परिणाम स्वरुप सहकारी सिद्धान्तका आधारमा नभएर विचारका आधारमा चल्न पुग्यो । हामी डेमोक्रेर्टसले यो कुरा महसुस गरिसकेपछि एन.सी.ए को जन्म भएको हो । एन.सी.ए ले सिद्धान्त विमुख भएको, बाटो विराएको नेपालको सहकारी अभियानलाई सही बाटोतिर डोराउने पहल गर्नेछ ।